Galbeed - Howling Pixel
Galbeed ama Qorax u dhac, qoraxsin waa mid ka mid ah Afarta jiho ee asalka ah,
Afarta jiho ee asalka ah
Waqooyi Koonfur Bari
Kani waa maqaal ku saabsan gobolka Awdal. Boqortooyadii hore ee deegaanka Awdal fiiri Adal.Awdal (Af-Carabi: أودال, sidoo kale "عدل‎") waa gobol ku yaala Waqooyiga Soomaaliya kaasi oo ka tirsan dowlada aan la aqoonsan ee Somaliland. Gobolka Awdal wuxuu dhacaa deegaano buuroley ah.
Awdal waxay deris la tahay wadanka Jabuuti xaga waqooyi-galbeed; Itoobiya halka galbeed; gobolka Woqooyi Galbeed xaga bari; iyo gacanka Cadameed oo ka xiga halka waqooyi.
Bay waa gobol ka mid ah Gobollada Soomaaliya, wuxuuna ku yaallaa bartamaha koofur-galbeed. Gobolka Bay wuxuu xuduud la leeyahay gobollada kala ah Bakool, Gedo, Hiiraan, Jubbada Dhexe iyo Shabeelaha Hoose. Magaalamadaxda gobolka Bay waa Baydhabo, waxay magaalamadaxda Soomaaliya ee Muqdisho u jirtaa 256 km oo ay kaga aaddan tahay dhinaca waqooti-galbeed. Magaalada Baydhabo waxay horey xarun kumeelgaar ah u ahayd Dawladda kumeelgaarka ah ee Soomaaliya.
Gobalka Bay wuxuu kamidyahy Gobollada aad ugu dheereya wax soo saarka beeraha sida Digirta, Misagada, Galeyda IWM.
Gobolka Bay waxaa si doo kale ugu dheereeya soo saarka caanaha taas oo sababtey inuu Gobollka Bay uu noqdo Gobollad ugu Raqiisan caanah.
Gobbalka Bay waa meesha ugu fiican ee Quraanka kariimka lagu barto Soomaaliya.
Bakool waa gobol ka mid ah Gobolada Soomaaliya wuxuuna ku yaalaa koonfir-galbeed ee Soomaaliya.
Galguduud ama (galgaduud) waa gobol ka mid ah Gobolada Soomaaliya wuxuunu ku yaalaa bartamaha Soomaaliya.
Waqooyi waxaa ka xiga gobolka Mudug, koonfur gobolka Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, galbeed gobolka Soomaali-Galbeed iyo bari oo ka xigta Badweynta Hindiya.
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Dhuusamareeb dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay xoolaha nool iyo kaluumeeysi iyo xoogaa beeraha ah.
Mareykanka (Af-Ingiriis: United States of America, loo soo gaabiyo U.S.A; Gobolada Isku Tegay ee Ameerika; carabi: الولايات المتحدة) waa dawlad Federaal Dastuuri ah dhacdana bartamaha Waqooyiga Ameerika.
Waxay ka koobantahay 49 gobol iyo Degmada Kolombia, (D.C. ama "District of Colombia"), oo ah magaalo-madaxda wadanka iyo xarunta dowlada wadanka. Waxaa ka xiga dhanka waqooyi Kanada, koofur Meksiko, iyo Gobolka Alaska oo dhaca Waqooyi Galbeed Qaarada Ameerika.
Soomaalaiya waxee u qeebsamtaa 18 gobol sida uu qabo dastuurka soomaaliya Cutubka 1aad, Qodobka 7aad, faqradiisa 1aad, 2aad iyo 3aad
Gobannimada Jamhuuriyadda soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda oo idil, oo ay ku jiraan berriga, jasiiradaha, biyaha goboleed, ururkooda, hawadooda iyo geyi-qaaradeedka.Dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa laguma xad-gudbaan lamana qaybin karo.Guddoon afti Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Hiiraan (Af-Ingiriis: Hiran, Af-Carabi: هيران) waa gobol ka mida gobolada ku yaal bartamaha soomaaliya, xad la leh gobolllada Shabeelaha Dhexe, Galgaduud, Shabeelaha Hoose, Baay, Bakool iyo Gobolka soomaali Galbeed ee Itoobiya.
Magaalo madaxda Gobolka waa Beledweyne oo ah magaalo aad u qurux badan.
Gobolka waxaa mara wabiga Shabeelle ee ka yimaada dhanka itoobiya
Jabuuti (Af-Ingiriis: Djibouti; Af-Canfari: Gabuuti; Af-Carabi: جيبوتي) loona yaqaan Jamhuuriyada Jabuuti waa dal yar ee ku yaala bariga Geeska Afrika. Jabuuti waxaay xad la leedahay Iritareeya xaga waqooyi, Itoobiya xaga galbeed iyo koonfurba iyo Soomaaliya oo ka xigta koonfurbari. Dhinaca kale Jabuuti waxaa ka xiga Bada cas iyo Gacanka Cadmeed.
Kanada waa wadan ku yaalo Woqooyiga Ameerika waxoona ku fadhiyaa dhul balaaran. Kanada waxee xuduud la leedahay dalka Mareykanka oo goboladiisa badan ka xiga Koonfur iyo gobolka Alaska oo ka xigta Woqooyi Galbeed, dhinaca bariga neh waxaa kaga dhagan [[badweynta
Atlantik]].Kanada waa Dawladda labaad ee ugu ween aduunka, ayadoo Dawladda koowaad ay tahay Ruushka.
wadanka kanada waxaa markiisa hore degenaan jiray dadka indianka ah oo assalkooda ka imaaday qaarada aasiya iyo dad inuit ah oo u badan griinland. Kanada waxay leedahay dad ah 35,151,728.
Saxaraha Galbeed Waa maamul kuyaala Galbeedka Afrika waxa uu maamulkani haystaa maamul hoosaad waxa uu markii hore ka mid ahaan jiray boqortooyada Maroko lakin hada waxa uu haystaa madax banaani xadidan ilaa sanadii 1976 waxana gacanta kuhaysa jabhada looyaqaano Polisario oo dagaal la gashay wadanka maroko shacabka kunool saxaraha galbeed waxa ay rabaan ictiraaf iyo madaxbanaani buuxda. saxaraha galbeed maamulka saxaraha galbeed waxa uu xubin kayahay Midowga afrika . waxa la ogsoonyahay in midawga afrika aykabaxaday dawlada maroko kadib markii maamulka saxaraha galbeed lasiiyay xubin joogto aha, saxaraha galbeed waxa uu qayb ka ahaa dhulkii ay gumaysanjirtay boqortooyadii isbayn
Galbeedka Sahara (/ - səhɑːrə, -hærə / (Ku dhawaad ​​codka dhegaysiga);  Carabi: الصحراء الغربية aṣ-Ṣaḥrā 'al-Gharbīyah, luqadaha Berber: Taneẓroft Tutrimt, Spanish iyo Faransiis: Sahara Occidental) Xuduuda Gobolka Maghreb ee Waqooyiga Afrika, oo qayb ahaan ay gacanta ku hayaan Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ee Sahrawi iyo qayb ahaan Morocco, oo xuduud u leh Morocco oo ku habboon waqooyiga, Aljeeriya woqooyi, Mauritania ilaa bari iyo koonfur, iyo Badweynta Atlantic xagga galbeed. Goobta dusha sare waxay u dhigantaa 266,000 kilomitir square (103,000 sq m). Waa mid ka mid ah dhulalka ugu caansan ee ku nool adduunka, oo badiba ka kooban dhulalka dhulgariirka. Dadweynaha waxaa lagu qiyaasay in ka badan 500,000,  taas oo ku dhawaad ​​40% ku noolaa magaalada Laayoune, oo ah magaalada ugu weyn ee galbeedka Sahara.
Isagoo kaashanaya Spain ilaa qarnigii 20aad, Galbeedka Galbeedka wuxuu ku jiray liiska Qaramada Midoobay ee dhulal aan dawli ahayn tan iyo 1963 markii uu dalbaday Morocco.  Waa dalka ugu badan ee ku yaal liiskaas, iyo illaa inta ugu badan ee degaanka. 1965-kii, Golaha Guud ee QM ayaa ansixiyay go'aankii ugu horreeyay ee Sahra Galbeed, isaga oo Spain weydiistay inuu xayiraad ku soo celiyo dhulka.  Hal sanno ka dib, xal cusub ayaa la ansaxiyay Golaha Guud oo codsanaya in afti loo qaado af-soomaaliga oo is-xukun leh.  Sanadkii 1975kii, Spain waxay ka tanaasushay xukunka maamul ee dhulka si ay u maamulaan maamul ay wadaagaan Morocco (kuwaas oo si rasmi ah u sheegtay dhulkii ilaa 1957)  iyo Mauritania  Dagaal ayaa ka qarxay dalalkaas iyo dhaqdhaqaaqa millatari ee Sahrawi, oo ka tirsan Ciidamadda Booliska, kaas oo ku dhawaaqay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Sahrawi (SADR) oo ay dawladdu kula wareegtay masaafurintii Tindouf, Algeria. Mauritania waxay sheegatay sheegashadeeda 1979-kii, Morocco waxay ugu dambeyntii xaqiijisay xakamaynta dhabta ah ee badi degaanka, oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn iyo kheyraadka dabiiciga ah. Qaramada Midoobay waxay tixgelinaysaa Booliiska Polisario inay noqdaan wakiilka sharciga ah ee dadka reer Srrawi, wuxuuna ku adkeeyaa in Sahrawisku xaq u leeyahay inuu iskiis u go'aamiyo. 
Soomaali waxay noqon kartaa:
Dhamaan wixii la xidhiidha wadanka Soomaaliya
Soomaalida, dadka u dhashay ama asal ahaan ka soo jeeda deegaanada Soomaaliya
Af-Soomaali, luuqad ka mid ah Kushitiga
Cunto Soomaali, cunto dhaqanka dadka Soomaalida
Dhaqan Soomaali, dhaqanka iyo sooyaalka bulshada
Bisad Soomaali, nooc ka mid ah bisadaha
Soomaali Galbeed, gobol ka tirsan wadanka Itoobiya
Woqooyi Bari, Kiinya
gobolka waqooyi bari (( North Eastern Province))waa gobol kamida wadanka Kiinya, dhamaan dadka kunoolina waa somali.laakiin kama tirsana wadanka Soomaaliya. Waa gobol kamida wadanka kiinya. gobolkan waxa uu wadanka kenya lagu daray, xiligii gumaysiga waxa jirtay in dhamaan dadka kunool gobolkaas laga qaaday cod bixin, cod bixintaas oo dhamaan ay ku raacaeen ama ay ku dooneen dhamaantood, in ay ku biiraan wadanka Soomaaliya, maadama ay yihiin somali lakin taasi madhicin, kadib markii xoog lagu qasbay wadnkaas, waxa dhacday in gumaystihii ingiriisku uu si qasaba u raaciyao dawlada kenya. Dadka kunool gobolka dhamaantood waa somali badankooduna waxay ka soo jeedan waqooyiga somaliya iyo somali galbeed tiradooduna waxa ay dhantahay.1.762370 tirada ama masaxada uu ku fadhiyo gobolka waqooyi bari waa 126.186, gobolku waxa uu ka koobanyahay deegaamo magaalooyinka ugu waawaynina waa ama waxay kala yihin
Maroodi jeex waa gobol ku yaalo jamhuuriyada Soomaaliland.Gobolkaan waxaa magaalo-madax u ah Hargeysa. Waxey xuduud la leedahay gobolada Awdal, saaxil, iyo dhinaca koonfurtana waxaa ka xiga Soomali galbeed ee gumeysiga Itoobiya
Guud ahaan, qaarada Yurub waxay ku fadhidaa deegaan dhan 10,180,000 square kilometres (3,930,000 sq mi), ama 2% oogada sare ee Dhulka (taasi oo u dhiganta 6.8% dhulka aduunka). Dhinaca siyaasada, qaarada Yurub waxaa ku yaala ilaa 50 dowladood oo madax-banaan, kuwaasi oo wadanka Ruushka noqonayo kan ugu weyn ee ugu bulshada badan - taasi oo qiyaas ahaan noqon karta 39% dhulka qaarada iyo 15% bulshada qaarada.
Dhinaca kale, qaarada Yurub waxaa ku nool dad dhan 740 million (qiyaastii ilaa 11% bulshada aduunka) tirokoob 2012.) Taariikh ahaan, qaarada Yurub waxay leedahay taariikh dheer oo ka soo bilaabanta wakhtiyadii ilbaxnimada ugu horeeysay, inkastoo dadka reer Yurub aad u horumareen markay bilaabantey kacaankii wershadaha.